Kpakpando nke Betlehem: kedu ihe ọ bụ, njirimara, akụkọ ihe mere eme na mbido | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 02/08/2021 09:44 | Nkewa
Dị ka omenala ndị Kraịst siri dị, Belen kpakpando Ọ bụ kpakpando ahụ na -eduga ndị Magi gaa ebe ọmụmụ Jizọs Kraịst. Oziọma Matiu kwuru na ndị Magi hụrụ ka kpakpando Betlehem pụtara na ọdịda anyanwụ, n'agbanyeghị na o kwughị ma ọ bụ mbara ala, kpakpando, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ gbasara mbara igwe. Dị ka ederede ahụ si kwuo, nwoke ahụ maara ihe so kpakpando ahụ mee njem wee kwụsị ebe a mụrụ Jizọs. Dọkịta ahụ tinyere ya na eze ndị Juu. Ọ bụrụ na ha bụ ndị na -enyocha mbara igwe Gris ma ọ bụ Rome, ha gaara ejikọ kpakpando nke kpakpando ahụ, mbara ụwa eze, na Regulus, kpakpando eze. Ọ bụrụ na ha sitere na Babilọn, ha nwere ike jikọta ya na Saturn (Kaiwanu). N'ọnọdụ ọ bụla, ọ nwere ike bụrụ na "ndị eze atọ" nke eriri Orion họpụtara Sirius.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe bụ njirimara nke kpakpando Betlehem na ụfọdụ akụkọ ya.
1 Ihe omimi nke kpakpando Betlehem
2 Akụkọ banyere kpakpando nke Betlehem
3 ndị maara ihe
4 Kedu ihe kpakpando ahụ nwere ike ịbụ?
Ihe omimi nke kpakpando Betlehem
Kpakpando nke Betlehem bụ otu n'ime ihe omimi kachasị ukwuu metụtara ọmụmụ Kraịst. Ọ bụ ihe mebere Saint Matthew, eziokwu karịrị ike mmadụ ma ọ bụ ọhụụ mbara igwe? Iji kọwaa ya, ị ga -amata mgbe amụrụ Jizọs na onye ndị amamihe si n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ bụ.
Banyere nwata Jisọs, Anyị na -amụta naanị site n'Oziọma nke Matiu na Saint Luk, na ha abụọ dị iche. N'echiche a, San Mateo nwere ohere sara mbara. N'eziokwu, eziokwu ahụ bụ na ị maghị ihe kpakpando Betlehem bụ na -emetụta ụbọchị ọmụmụ Kraịst, mana nke a bụ nnukwu ajụjụ a na -edozighị: olee mgbe a mụrụ Jizọs? Iji zie ezi, a mụghị ya afọ 2021 gara aga. Ụbọchị anyị ezighi ezi ma ọ dabara na ọmụmụ Jizọs. Ee, ihe kacha njọ bụ na ọ nweghị onye ọka mmụta na -anwa anwa ịkọwa ụbọchị akọwapụtara na ugbu a enweghị ike ime ihe ọ bụla.
Akụkọ banyere kpakpando nke Betlehem
Mgbe Eze Ukwu Siza Ọgọstọs nyere iwu ka a gụọ mmadụ ọnụ, Oziọma ndị ahụ na -akọwa ọmụmụ Jizọs, nke mere n'agbata 8 na 6 BC. C. «A ga -edebanye aha mmadụ niile n'obodo ha. Josef onye sitere na ezinụlọ Devid hapụrụ Nazaret, obodo Galili, gaa Betlehem, Judia, obodo Devid, ka ọ debanye aha ya na nwunye ya dị ime Mary. Ọ na -adabakwa afọ ikpeazụ nke Eze Herọd, onye nwụrụ na 4 BC. C.. Ụbọchị chi jiri n'ehihie. Edere chi jiri n'ehihie abụọ na Machị 13 na Septemba 5
Herọd gwara dọkịta ahụ, sị: “Gaa Betlehem ma chọpụta nke ọma ọnọdụ nwatakịrị ahụ; mgbe ịchọtara ya, mee ka m mara, mụ onwe m chọkwara ịga fee ya ofufe ”. Ma ndị amamihe ahụ alọghachighị, ebe ha maara ebumnobi Herọd, ha sikwa ụzọ ọzọ laghachite. «Ndị amamihe ahụ mere Herọd akaje, iwe were ya nke ukwuu. O nyere ndị mmadụ iwu ka ha gbuo ụmụaka niile na -erubeghị afọ abụọ n'ime alaeze anọ ahụ. "
N'oge ahụ, Jizọs ga -abụ afọ abụọ. Ịmara ụbọchị ọnwụ Herọd na ụbọchị o gburu ụmụaka na -erubeghị afọ abụọ obere oge tupu ọnwụ ya, Ụbọchị ọmụmụ Jisọs bụ 7 ma ọ bụ 6 BC N’afọ 2008, otu ndị ọkà mmụta ihe ochie sitere na Mahadum Hibru nke Jerusalem chọtara ọtụtụ narị ozu ụmụaka site na narị afọ nke 0 AD, gbara afọ 2-XNUMX, n’oge a na-egwupụta ihe, nke dabara na ogbugbu nke Herọd.
ndị maara ihe
N'agbanyeghị kpakpando nke Betlehem, ọ ga -abụrịrị ihe omume dị ebube nke kpaliri mmasị ndị Magi, mana nke a abụghị maka ụmụ amaala ndị ọzọ. Saint Matthew bụ naanị onye kwuru ndị Magi, ma enyeghị ya aha eze, ma ọ bụ aha ya, ma ọ bụ nọmba ya. E nyere ha aha eze na narị afọ nke atọ. Na narị afọ nke anọ, ndị ọkà mmụta okpukpe Origen na Tertullian kwuru maka ndị amamihe atọ, na narị afọ nke XNUMX a kpọrọ Melchior, Gaspar na Baltasar aha. Ndị na -eme anwansi bụ ndị maara ihe na ndị ọkà mmụta sayensị maara mbara igwe na ihe omume eluigwe nwere ike ime n'ọdịnihu.
Ha kọwara usoro akara nke na -anọchite anya ịbịaru nso na mbara ala ọzọ ma ọ bụ ịbanye na ịhapụ ụyọkọ kpakpando. Ha bụkwa ndị na -agụ kpakpando. Ndị Magi bụ ndị nnọchite anya kọntinent atọ ama ama n'oge ahụ; Asia, Africa na Europe. Ha bụ ndị nnọchite anya ụwa niile ama ama.
Kedu ihe kpakpando ahụ nwere ike ịbụ?
Njikọ nke mbara ala mere na 7 BC. C., nke anaghị adịkarị. Ụwa Jupiter gafere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Saturn ruo ugboro atọ n'ime obere oge. Nke a mere na kpakpando Pisces. Onye na -eme anwansi kọwara eziokwu a dịka: a mụrụ nnukwu eze (Jupiter) ikpe ziri ezi (Saturn) n'etiti ndị Juu (Pisces). Akara nke azụ nwere ihe nnọchianya oge ochie nke Iso Christianityzọ Kraịst, ụfọdụ ndị ọkà mmụta isiokwu a na -ekwupụta na esitere na ọnọdụ Jupiter na Saturn na ụyọkọ kpakpando, yana na -emetụtakwa ọmụmụ onye ọkụ azụ, nke Jizọs .
Dị ka onye amụma si kwuo, a tụrụ anya ọbịbịa Mesaịa, ihe ịrịba ama ndị a na -egosi na ọ na -eme, opekata mpe maka ndị Magi si n'ọwụwa anyanwụ. Jupiter bụ chi bụ isi na Saturn bụ nna ya. Olee nnukwu ihe omume nke pụrụ ịchọ ọmụmụ Mezaịa ahụ? Ọ bụghịkwa naanị njikọ nke mbara ala kama ugboro atọ. Ndị eze, chi na ndị ọkụ azụ, ihe nnọchianya kwekọrọ n'ọdịdị nke nnukwu onye, ​​ma ọ dịkarịa ala maka ndị na -eche Mesaya ahụ.
Ọ nwere ike bụrụ supernova dị ike, kpakpando ji okpukpu iri karịa anyanwụ nke gbawara, mana enweghị ndekọ ọ bụla na ahapụbeghị ya na mbara igwe. Otu ihe dị ịtụnanya mere na Machị 31 nke afọ 5 TOA. C. Kpakpando ọhụrụ na -amụnye elu -igwe. Novae bụ kpakpando na -enwu enwu, ọ bụghị na -enwu dị ka supernovae, mana ha mara mma. Kpakpando ọhụrụ ahụ charapụrụ ruo ụbọchị 70 ndị dibịa afa sokwara ya n'ebe ọwụwa anyanwụ. Mgbe ha rutere Jerusalem na Herọd hụrụ ha, kpakpando ahụ na -enwu na ndịda, obere oge tupu chi abọọ, na Betlehem.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara kpakpando nke Betlehem na akụkọ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Belen kpakpando